Olee otú Tinye Ndepụta Okwu ka AVI Files na Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
A nkuzi ga-eduga gị site ole na ole nnọọ mfe nzọụkwụ nke na-agbakwunye ndepụta okwu ka AVI videos. M nzọ ị na-agaghị enwe ihe nkiri ọ bụrụ na ị na-adịghị aghọta asụsụ nke ya. Ụzọ kasị mma iji dozie nsogbu a bụ nanị tinye a mpempe sobtaitel n'ime nkiri. Na 10 mins site ugbu a, i nwere ike ịmụta nke a atọ na-eji ya maka ndị ọzọ nke ndụ gị.
Part 1: Olee ịgbakwunye ebudatara ndepụta okwu gị exsiting AVI fim
Part 2: Olee dezie gị onwe gị ndepụta okwu na gbakwunye AVI nkiri
Part 1: Olee ịgbakwunye ebudatara ndepụta okwu gị ẹdude AVI fim
Mgbe na sobtaitel faịlụ site na internet (ọtụtụ n'ime sobtaitel faịlụ ndị na .srt, .ass na .ssa faịlụ ndọtị.), Anyị kwesịrị a ngwá ọrụ iji tinye sobtaitel ka AVI video. Ebe a anyị nwere ike ikwu Video Converter Ultimate, nke nwere ike inyere gị aka ime ka ọ nanị ole na ole nzọụkwụ. Ugbu a download, wụnye na-agba ya.
N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu na-esi Ibu Ibu gị chọrọ ndepụta okwu ka AVI nkiri:
Nzọụkwụ 1: Import AVI ma ọ bụ ndị ọzọ video faịlụ
Import video faịlụ ka a Video Ntụgharị (Windows 8 na-akwado) site na-adọkpụpụta video n'ime interface ma ọ bụ i nwere ike pịa "Tinye Files" button mbubata video faịlụ.
Nzọụkwụ 2: Tinye sobtaitel ka AVI faịlụ
Pịa "Dezie" bọtịnụ na ị ga-ahụ video edezi window. Na-aga "Ndepụta Okwu" ngalaba na ego sobtaitel ndọpụta ndepụta. Ugbu a, i nwere ike tinye sobtaitel ka video site na kọmputa gị, na-enwe a preview na edezi window. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, pịa "OK" button iji gosi ntọala ma na-emechi edezi window.
Cheta na: Ị nwekwara ike dezie video ebe a site na cropping, itinye mmetụta ma ọ bụ na-agbakwunye watermarks.
Nzọụkwụ 3: Malite akakabarede
Tupu akakabarede, ị nwere ike họrọ chọrọ mmepụta format si mmepụta format ndepụta bụrụ na ị chọrọ iji chebe gi AVI vidiyo na ndị ọzọ formats. Ugbu a, dị nnọọ pịa "tọghata" button na-amalite converting video. Ọ bụ ya. The sobtaitel faịlụ a ga-kwukwara na mmepụta video.
Naanị ole na ole nzọụkwụ na Video Ntụgharị (Windows 8 na-akwado), ị nwere ike itinye sobtaitel ka AVI videos. Nke ahụ bụ mfe ma dị mfe maka onye ọ bụla. Iji mụtakwuo nkọwa, ị nwere ike ịga na User Guide nke Video Ntụgharị.
I nwekwara ike na-ezo aka video nkuzi n'okpuru:
I nwekwara ike ike a subtiltes faịlụ nke gị onwe gị na-tinye ya na gị AVI nkiri. Iji mee nke a, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) ukwuu tụrụ aro. Na ya, ị nwere ike họrọ si ọgaranya ederede ego ma na-etinye ya na gị na video ke otu òké click. Ihe bụ ihe ọzọ, ahaziri ndepụta okwu ga-eme ka gị video nnukwu na pụrụ iche.
Gbalịa Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) maka free ugbu a:
A mmemme cross-n'elu ikpo okwu, na n'okpuru nduzi na-ewe Windows version na-egosi otú ịgbakwunye ndepụta okwu ka AVI nkiri. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọkụ ndepụta okwu ka AVI video on Mac, dị nnọọ ibudata Mac version ime otu ihe ahụ.
Nzọụkwụ 1: Mbubata gị mbụ AVI video
Mgbe ị malite a usoro, ma họrọ "16: 9" ma ọ bụ "4: 3" akụkụ ruru na-aga "Full Njirimara mode", ị ga-abịa a nnọọ kensinammuo isi window, gosiri dị ka n'okpuru. Mbubata gị isi iyi AVI nkiri, nnọọ pịa "Import" na-agagharị na gị faịlụ nchekwa na kọmputa ma ọ bụ ịdọrọ gị AVI videos ozugbo na ya bụ isi window. The kwajuru obere vidiyo ga-egosi dị ka thumbnails na-ekpe ihe tree. Mgbe ị gbakwunye faịlụ niile, ikpuru na dobe ha ka ha na video usoro iheomume otu otu.
Nzọụkwụ 2: Tinye ndepụta okwu ka AVI video na n'ihu hazie ya
Pịa "Text" taabụ n'elu usoro iheomume, ma bulie ọkacha mmasị gị template n'ebe a na-ịchọrọ ịgbakwunye. Ozugbo, a ga-enwe ederede thumbnail "T". Right pịa ya ma họrọ "Dezie" ke mmapụta menu. Ugbu a, i nwere ike pịnye na gị onwe gị okwu, ịgbanwe ya font, agba, setịpụrụ mbugharị na / si mmetụta, na ndị ọzọ.
A n'akụkụ-na-n'akụkụ Michael window bụ availble ka ị na-ele mmetụta na ezigbo oge. Ọzọkwa, i nwere ike ịgbanwe A usoro iheomume Zoomer aka ịchọta ndị ebe ị chọrọ n'ụzọ ziri ezi.
Mgbe ahụ, pịa laghachi na-azụ bụ isi window, na ịdọrọ ederede ebre oge ka mmekọrịta gị na video.
Nzọụkwụ 3: mbupụ gị e kere eke
Mgbe ị na-afọ ojuju na ikpeazụ resut, nanị kụrụ "Mepụta" zọpụta a ọhụrụ AVI nkiri na gị agbakwu ndepụta okwu. Na mmepụta window na-egosi, ị nwere ike ịhọrọ site na a varity nke nhọrọ. Ka ihe atụ, họrọ "AVI" si "Format" taabụ, ma ọ bụ bulie a ahazi preset dị ka "Zune" n'okpuru "Ngwaọrụ" udi.
Ugbu a ị na mụtara abụọ ụzọ na-esure ndepụta okwu ka AVI video ga-azọpụta gị a otutu oge na mgbalị. Ina malitere ugbu a. Ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla, biko, ka m mara na ikwu.
Free FLV Player maka Windows 8: Easily Play Your FLV Files
> Resource> Video> Olee otú iji Tinye Ndepụta Okwu ka AVI Files na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)